ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာအိတ်ချိအိုများ | တိုယိုတာအိတ်ချိအိုကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Luxury Car (7)
Root Category (35)
Pearl white Toyota Axio 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Pearl White Toyota Axio 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Silver Toyota Axio 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Lks 265 ညှိနှိုင်း
Silver Toyota Axio 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Silver Toyota Axio 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သ...
Toyota Axio 2013
Silver Toyota Axio 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Lks 273 ညှိနှိုင်း
Silver Toyota Axio 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပ...
Lks 288 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Axio 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
White Toyota Axio X 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပ...
Lks 275 ညှိနှိုင်း
White Toyota Axio 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါ...
Lks 241 ညှိနှိုင်း
Pearl white Toyota Axio 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မ...
Pearl white Toyota Axio 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မ...
Lks 270 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Axio 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်း...
Dark blue Toyota Axio 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျာ...
Silver Toyota Axio 2009 ??????? ???????????????? ????????????????????????????? ???????????????? ????????? A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ?????????????????...
Brown Toyota Axio 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Grey Toyota Axio 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Pearl White Honda Axio 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Lks 219 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Axio 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Lks 200 ညှိနှိုင်း
Silver Toyota Axio 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Black Toyota Axio 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
တိုယိုတာ အိတ်ချိအိုများဟာ တိုယိုတာ ကိုရိုနားကားများရဲ့ အဆက်အနွယ်များ ဖြစ်ပြီး ဌင်းကို ကိုရိုလာ အိတ်ချိအိုများလိုလည်း ခေါ်ပါတယ်။ ၂၀၀၆ကနေ ယနေ့ထိ ထုတ်ပြီး ၂၀၁၃ ထိထုတ်တဲ့ကားတွေကိုတော့ အိတ်ခ်ျပို့ကားတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ တိုယိုတာ အိတ်ချိအိုကားတွေကို အနည်းအကျဉ်းတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး အရမ်းကြီးတော့ ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်တဲ့ ကားအမျိုးအစား တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ တိုယိုတာ ဘယ်တာ ကဲ့သို့ ကားတွေနဲ့ ဒီဇိုင်းအားဖြင့် ဆင်ပြီး အတွင်းခန်းကတော့ တော်တော်ကြီးကို သိသိသာသာ ဆင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တံခါး လက်ကိုင်တွေနဲ့ အပြင်အဆင်တွေလောက်သာ မသိမသာ ကွဲပြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ဘ်ဂွန်ပိုင်းကိုလည်း ထုတ်ပါတယ်။ ဌင်းဝဘ်ဂွန် ပုံစံမှာတော့ ကိုရိုလာ ဖီးဒါနဲ့ ဆင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ နိင်ငံ အလိုက်မူတည်ပြီး ပုံစံမှာ ကိုယ်ထည်ကျဉ်းကားနဲ့ ကိုယ်ထည် ကျယ်ပြန့်တဲ့ကားဆိုပြီး ကွဲသွားပါတယ်။ ဂျပန်မှာကတော့ ကိုယ်ထည် အကျဉ်းတွေကို ထုတ်တဲ့အတွက် ပြည်တွင်းမှာတော့ ဌင်းပုံစံရှိတဲ့ ကားတွေကို အများဆုံးတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၃၀၀ စီစီနဲ့ ၁၅၀၀ စီစီထဲမှာ ၁၅၀၀ စီစီ အိတ်ချိအိုကားတွေဟာ အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၄၉၆ စီစီဖြင့် ၁၅၀၀ စီစီ မပြည့်တစ်ပြည့်ရှိပြီး ပါဝါအားက 100 မြင်းကောင်ရေအား ရှိပါတယ်။ လောင်စာအား အသုံးပြုမှုကတော့ (၁) လီတာကို ၁၂.၈ ကီလိုမီတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို အိတ်ချိအို လို့လည်း ခေါ်တဲ့ ကိုရိုလာရဲ့ နောက်ဆုံး ၁၀ခုမြောက် မျိုးဆက် တွင် ကားကိုယ်ထည် ပေါ့ပါးမှု၊ လေကာများ၊ပါဝင်လာပါတယ်။ ၁၅၀၀ စီစီမှတော့ လေးဘီးမောင်း စနစ်နဲ့ နှစ်ဘီးမောင်း စနစ်ဆိုပြီး လာပြီး ၁၃၀၀ စီစီမှာတော့ နှစ်ဘီးမောင်းစနစ်ကိုပဲ လာပါတယ်။ ပြည်ပဈေးကွက်မှာတော့ လေးဘီးစနစ်တွေဟာ ဈေးပိုကြီးကြပေမဲ့ ပြည်တွင်း အ၀ယ်လိုက်တဲ့ လေလံက ဘီးမောင်းစနစ်ကတော့ နှစ်ဘီးမောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကား အမြင့်စားတွေမှာပဲ လေးဘီး စနစ်ကို ပို အသုံးများတာကို ပြည်တွင်းမှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မော်ဒယ် မနိမ့်လွန်း မမြင့်လွန်းဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၉ မော်ဒယ်၊ ၂၀၁၀ မော်ဒယ်တွေမှာ အရှေ့ဖက်က အနည်းငယ်ကြီးမားတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုကို ပိုင်းဆိုင်ထားပြီး နှင်းခွဲမီးလုံးတွေ မပါလာခဲ့ပါဘူး။ မီးလုံးတွေက အနည်းငယ် ချွန်တဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး အနောက်ဖက်က တော့ ပုံမှန် ဆီဒန်တွေ အတိုင်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး အတွင်းခန်းကလည်း သပ်ရပ်ပြီး ရှင်းလင်းပါတယ်။ လူ( ၅) ယောက်ထိုင် ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှ တိုယိုတာ အိတ်ချိအိုများ
ပြည်တွင်းမှာတော့ အရောင်မျိုးစုံတဲ့ တိုယိုတာ အိတ်ချိအိုများကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး နှစ်ဘီးမောင်း စနစ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ကားတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ညာမောင်းကားတွေ ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပြီး လူဦးရေးအားဖြင့် (၅) ယောက်ခန့် စီးနင်းလိုက်ပါ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။အခြားကားတွေနဲ့ ယှဉ်လျှင် ပုံစံ သိပ်မထူးခြားတဲ့ကားတွေပါပဲ။
E 140 ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်နံပါတ်နဲ့ မျိုးဆက် (၁၀) ဆက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ တိုယိုတာ ကိုရိုလာ အိတ်ချိအိုတွေကို ဆီဒန် အမျိုးအစားကား တစ်စီးအနေနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ထို အမျိုးအစားထဲမှာမှ ၀ဘ်ဂွန် ပုံစံတွေကို ကိုရိုလာ ဖီးဒါကားတွေ အနေနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဌင်း ပုံစံ နှစ်မျိုးရှိတဲ့ ကားတွေရဲ့ အင်ဂျင်ကတော့ ၁၃၀၀ စီစီကနေ စပြီး ၂၀၀၀ စီစီထိကို ရှိနေပါတယ်။ တိုယိုတာ အိတ်ချိအိုတွေကတော့ အင်ဂျင် ၁၅၀၀ စီစီနဲ့ ၁၈၀၀ စီစီတို့က စပါတယ်။ တိုယိုတာ အိတ်ချိအို G ဂရိတ် ၊ X ဂရိတ်တွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး တာဗို့ အင်ဂျင်ပါဝင်တဲ့ အိတ်ချိအို GT ကားတွေကိုလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းကိုတော့ အိတ်ချိအို ပြိုင်ကားနဲ့ တိုယိုတာ အိတ်ချိအို ပေါ်မှာ အခြေခံထားတဲ့ ကား အမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းမှာတော့ မန်နျူးယယ် ဂီယာကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ဂရိတ်တွေကတော့ အော်တို ဂီယာတွေများပါတယ်။ အင်ဂျင် ၁၅၀၀ စီစီတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပြည်တွင်းက ကားနယ်ပယ် လူထုက သိပ်မ၀ယ်ဖြစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ဘ်ဂွန်ကား ဖြစ်တဲ့ ကိုရိုလာ ဖီဒါကိုတော့ ပြည်တွင်းမှာ လူကြိုက်များတာကို တွေ့ရပါတယ်။
တိုယိုတာ အိတ်ချိအိုတွေဟာ ၁၅၀၀ စီစီ အခွန်နဲ့ သိပ် တန်းမ၀င်သည့်နည်းတူစွာ ကားဈေးကလည်း နည်းနည်း တင်းပါတယ်။ နောက်ပြီး ပုံစံကလည်း သိပ်မထူးခြားတာမို့။။။။ ဈေးနှုန်းတွေကတော့ အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း ၁၄၀ လောက် ကနေ စပါတယ်။ ကျပ်သိန်း ၁၉၀ ၊ ၂၀၀ ထိ ရှိတာကို တွေ့ရပါမယ်။ ပြည်တွင်းက ကုမ္ပဏီတွေမှာ တစ်ပတ်ရစ်တွေကို အဆင်ပြေစွာ ၀ယ်ယူနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိတ်ချိအိုတွေဟာ တိုယိုတာ ရဲ့ စီးရီးထဲမှာ ဖြစ်သည့်နည်းတူစွာ ဌင်းတိုယိုတာရဲ့ ဘယ်တာလိုင်းနဲ့လည်း အိတ်ချိအိုရဲ့ အတွင်းခန်းက တော်တော်တူပါတယ်။ ဂီယာဘောက်၊ ဒတ်ရှ် အုံးတွေက အစဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ပန်းကတော့ ခေါင်းပိုင်းက အနည်းငယ်ကျယ်ပြီး ကြီးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းကို နှစ်သက်ပါမှု အိမ်စီး၊ ရုံးစီးကားတွေ အဖြစ် သင့်လျှော်တဲ့ကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် ဆိုဒ်ကိုလည်း စုံလင်စွာ ရွေးချယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။